Icebo elomileyo - Impawu, Ukubunjwa kunye nokusetyenziswa
Oko Kufuneka Ukwazi Ngayo Icebo Eliqileyo
Umbuzo: Iyintoni Icebo elomileyo?
Yintoni eyomileyo ice Kutheni kudala umsi? Ngaba kukho imithetho ekhethekileyo efunekayo yokusingatha icebo elomileyo?
Impendulo: I- dry ice (irry ice) iyigama eliqhelekileyo le-carbon dioxide eqinile (CO), eyenziwe ngo-1925 yi-Long Island-based based Perst Air Devices. Nangona kwasekuqaleni lixesha lokuthengisa, "iqhwa elomileyo" liye yindlela eqhelekileyo yokubhekisela kwi-carbon dioxide kwindawo yayo eqinile, okanye iqhwa.
I-Ice Ice Emile?
I-carbon dioxide "iqhwa" ngokuqulunqa igesi ye-carbon dioxide kwisigxina esiphezulu sokwenza iqhwa elomileyo.
Xa ikhutshwa, njenge-carbon carbon dioxide, ikhuphuka ngokukhawuleza ize ikhuphuke, ipholisa enye i-carbon dioxide ukuya kwindawo epholileyo (-109.3 degrees Fahrenheit okanye -78.5 degrees Celsius) ukuze ibe "iqhwa" elomeleleyo. Oku kuqinileyo kunokuxininiswa ndawonye kwiibhloko, iipelisi kunye nezinye iifom.
Iqhwa elomileyo elinjalo "ikhephu" lenza kwakhona umbhobho we-carbon dioxide umlilo xa usetyenziswa.
Iimpawu ezikhethekileyo zeDry Ice
Ngaphantsi kwengcinezelo engokwemvelo yomhlaba, iqhwa elomileyo lijongene nenkqubo yenkqantosi, iguquka ngokuthe ngqo ukusuka kwifom. Ngokuqhelekileyo, kwiqondo lokushisa kunye noxinzelelo oluqhelekileyo, lincinci ngesantya se-5 ukuya kwi-10 iipounds nganye iiyure ezingama-24.
Ngenxa yobushushu obuphantsi kakhulu beqhwa elomileyo (bona iMigaqo yoKhuseleko apha ngezantsi), isetyenziselwa isiqholo. Ukufakela ukutya okufudumele kwiqhwa elomileyo kukuvumela ukuba lihlale likhuni ngaphandle komonakalo oya kubandakanywa nezinye iindlela zokupholisa, njengamanzi avela kwiqhwa eliqhakazile.
Ukusetyenziswa kweeNinzi zaseDry Ice
Izinto zokupholisa - ukutya, iisampuli ze-biological, izinto ezilahlekayo, izinto zeekhomputha, njl.
Ubomvu obomileyo obomileyo (jonga ngezantsi)
Ukulima kwefu ukunyusa ukunyuka kwamafu okukhoyo okanye ukunyuka kwamafu
Iipelisi ezincinci ziyakwazi "ukutyhulwa" kwiindawo zokuzihlambulula, ezifana ne-sanding ... kuba ihluthelwa phantsi, inzuzo iyindawo encinane yokuhlambulula
Ezinye izinto ezisetyenziswayo zoshishino
I-Ice Fog Yomileyo
Enye yezona ziqhelo ezisetyenzisiweyo zeqhwa elomileyo ziyimiphumo ekhethekileyo, ukudala ubumnyama nomsi . Xa idibaniswe namanzi, iyancancisa ibe ngumxube obandayo we-carbon dioxide kunye nomoya omswakama, obangela ukunyanzelisa umphunga wamanzi emoyeni, ukwenza inkungu. Amanzi afudumeleyo akhula ngokukhawuleza kwinkqubo ye-sublimation, ukuvelisa iziphumo ezininzi zefuthe.
Izixhobo ezinjalo zingasetyenziselwa ukwenza umshini wokutshaya , nangona iinguqu ezilula ezi zinto zingadalwa ngokubeka iqhwa elomileyo emanzini kunye nokusebenzisa abalandeli kwiindawo eziphantsi.
I zi Khokelo
Musa ukunambitha, udle okanye ugxume! Iqhwa elomileyo liyabanda kwaye linokulimaza umzimba wakho.
Bagqoke iiglavu ezinzima, ezifakwe emagqabini. Ekubeni iqhwa elomileyo libanda, liyakonakalisa nasesikhumbeni sakho, kukunike i-frostbite.
Musa ukugcina kwisitya esitywinwe. Ngenxa yokuba iqhwa elomileyo lihlala lincinci kwi-carbon dioxide igesi, ukuyigcina kwisitya esitywinwe kuya kubangela ukuba uxinzelelo lwakhiwe. Ukuba lakha ngokwaneleyo, isitya singaphula.
Sebenzisa kuphela kwisikhala esiphefumlelweyo. Kwindawo engenawo umoya, ukwakha i-carbon dioxide kunokudala ingozi yokuhlutha. Oku kunobungozi obukhulu xa ususa iqhwa elomileyo kwisithuthi.
I-carbon dioxide inzima kunomoya. Kuya kulala phantsi. Gcina oku engqondweni xa ucinga malunga nendlela yokwenza iindawo ziphuculwe kakuhle.
Ukufumana i-Dry Ice
Unokuthenga i-ice eyomileyo kwiindawo ezininzi zokutya. Kufuneka ucele, nangona kunjalo. Ngamanye amaxesha kunokukho imfuneko yeminyaka ekuthengeni iqhwa elomileyo, elifuna umntu oneminyaka eyi-18 okanye ngaphezulu.
Ukuqonda iiMetamorphic Facies
Udliwano-ndlebe: UVincent Gallo kwi-Controversial 'I-Brown Bunny'
Iintsingiselo, Ukubhengezwa, kunye nabalinganiswa begama lesiJapane elithi "Hidoi"